Otu esi emepụta webụsaịtị blọgụ gị - With 6 Easy Steps - Mụta ịde blọgụ ọkachamara
Ụdị ọkwa:Blọgụ / Weebụsaịtị
Ịmepụta weebụsaịtị blog dị mfe. Ịde blọgụ bụ otu ụdị weebụsaịtị nke na -elekwasị anya na ide ọdịnaya. Ozi bara uru karịa nke ị na -enye ndị ọrụ, ha na -alaghachi na webụsaịtị gị ka ha gụọ akụkọ ndị ahụ.
Na asụsụ izugbe, anyị ahụla akụkọ akụkọ, ozi gbasara ndị ama ama na mmelite ha mgbe niile, wdg niile bụ akụkụ nke ịde blọgụ.
Ndị na -ede blọgụ na -edee ezigbo ozi yana echiche nke ha maka ihe adịghị mma na ihe ziri ezi gbasara otu ihe. Dị ka ọmụmaatụ, ekwentị apụl ọhụrụ ewepụtara nwere ọghọm na ndọghachi azụ.
Edemede Blog anyị nwere ike ide maka arụmọrụ ekwentị, atụmatụ, na nyocha ma kwurịta na post blọgụ. Nke a na -enyere ndị ọrụ aka ịtụkwasị ha obi na nloghachi, ndị na -agụ na -ede echiche ha na ngalaba nkọwa nke na -eme njikọ n'etiti ndị edemede na ndị na -agụ ya ngwa ngwa.
Nke a bụ nchịkọta na nchịkọta, ịkekọrịta echiche ndị na -aghọkwa ụzọ isi nweta nnukwu ego naanị ma ọ bụrụ na ndị na -agụ gosi mmasị na afọ ojuju ozi kwesịrị ntụkwasị obi site na ntuziaka kwesịrị ekwesị.
Ka i si hụ, Akụkọ ị na -agụ bụ akụkọ blọgụ na webụsaịtị a. Akụkọ niile dị na webụsaịtị anyị na -enye ndị na -agụ blọgụ ozi bara uru. Anyị na -enyere obodo aka site n'ịkekọrịta ụzọ dị mma isi nweta ego na ntanetị. Nke a na -echebe ha pụọ ​​n'ụdị mmechuihu ọ bụla.
Ihere anaghị eme m ikwu, n'oge mbido njem ịde blọgụ m, M mere ọtụtụ mmehie. N'oge ahụ, Adị m ọhụrụ. Anaghị m efunahụ onwe m, nwere ihe karịrị afọ asaa nke ahụmịhe na njem ịde blọgụ, Enwere m uru iduzi gị nke ọma maka ịghara imeghachi mmejọ ahụ. Naanị ihe bụ na ị ga -agụ akụkọ a nke ọma.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, ị ga -ejedebe na usoro kwesịrị ekwesị iji bido blọgụ ngwa ngwa na ngwa ngwa.
6 Nzọụkwụ dị mfe iji mepụta weebụsaịtị Blog gị
Nzọụkwụ 1: ahọpụta aha blọgụ gị
Nzọụkwụ 2: Mee blọgụ dị n'ịntanetị
Nzọụkwụ 3: Nhazi Blog: Ntọala
Nzọụkwụ: 4 Edemede Blog mbụ
Nzọụkwụ 5: Nkwalite akụkọ blọgụ
Nzọụkwụ 6 : Nchịkọta ego nke Blog: Nweta ego
Enwere oke 6 usoro ị ga -eso tupu ịmalite blọọgụ gị.
Họrọ Aha Blog: Na mbụ, ị ga -ahọrọ aha blọgụ.
Zụrụ ngalaba na Bochum: Mee ka blọọgụ gị dị n'ịntanetị.
Ịtọlite ​​blọgụ gị: Nhazi Blog.
Ịde blọgụ blọgụ gị: Ọ greatụ dị ukwuu ide ahụmịhe
Nkwalite nke Blog: Ịkekọrịta na Facebook, Twitter wdg.
Nweta ego site na ịde blọgụ: Mgbakwunye, Nkwado.
Ka anyị bido blọgụ gị
Nke a bụ aha ya na adreesị ụlọ gị. Ọ bụrụ na onye na -agụ pịnye aha na ihe nchọgharị weebụ, nke a ga -emepe weebụsaịtị blọgụ. Mụ onwe m na -akwado gị ka ị nwee aha blọgụ nwere isiokwu metụtara ya.
Dị ka m gwara gị na mbụ, ọ dị ka aha ụlọ ahịa gị. Enwere ụfọdụ njirisi n'azụ ịhọrọ aha blọgụ gị. Nke a bụ otu aro ị kwesịrị ịga mgbe niile .com. Ihe kpatara .com ji bụrụkarị ihe a pụrụ ịtụkwasị obi n'ụwa niile. A na -eji ya eme ihe maka ebumnuche azụmahịa.
Na mgbakwunye na nke a, ị kwesịrị ịde blọgụ na ị nwere ahụmihe bara uru na ndụ. Echere m n'onwe gị na ị kwesịrị inwe ọtụtụ ihe.
Ị nwere ike ịkọ akụkọ gị 100 ka 200 blọgụ blọgụ dị mfe. Ebe, ọ bụrụ na ị na -ede isiokwu ị na -amaghị maka nke a ga -emecha mechaa edechaa 50 ka 60 isiokwu.
Ọmụmaatụ, Enyere m aka na nso nso a enyi m onye nkuzi nwere ezi mmụta gbasara physics. Ọ chọrọ ịmalite blọgụ ha otu ọnwa gara aga ma nwee mmasị ide ngwa elektrọnik. Enyere m ya ndụmọdụ ka ọ dee banyere physics dịka ị nwere ihe ọmụma miri emi.
We had a great discussion, N'otu aka ahụ, you should also write a blog about your life experience it is always good to go with hobbies, passion or profession.
The another step is making your blog available online. It means if somebody searches your blog content by typing your blog name in the browser. Blọọgụ gị ga -apụta. Maka ime ya, ị ga -azụrịrị nnabata. Ụbọchị ndị a, ụfọdụ onyinye dị mma na -aga n'ihu nke ga -ebelata ọnụ ahịa nnabata gị nke ukwuu.
Mụ onwe m na -akwado gị ka ị ghara ịkwụ ụgwọ aha ngalaba yana ọnụ ahịa nnabata iche. Nke a ga -abawanye ọnụ ahịa mkpokọta blọgụ niile.
Kama nke a, ụfọdụ ụlọ ọrụ nnabata dị ka Bluehost na -enyere gị aka ịnye ọrụ nnabata aha ngalaba.com.com efu. Ọrụ webụsaịtị ndị ọzọ na -enye gị ohere iwulite blọọgụ gị na ọnụ ala. we have mentioned them below in the table.
The helpful blog post that people are searching their problem and you have plenty of knowledge about it. Maka nke a, I generally take the help of Google to autocomplete as well as some SEO tools. When we combine and evaluate both of the search terms with an approximate volume of people searching. Nke a na -akpali m nke ukwuu ide edemede nwere echiche nke ndị ga -agụ ọkwa a
N'ebe a, m ga -achọ ịnye gị ndụmọdụ. Ị ga-eji usoro SEO dị na peeji kwesịrị ide akụkọ gị. Ihe kpatara ya bụ– ọ na -enyere Google aka ịghọta na i nwere afọ ojuju nke ọma yana nke ọma. O doro anya na Google emeela onwe ya nke ọma. Na usoro ihe ọhụrụ ọhụrụ, ha nwere ike ịghọta ọdịnaya ị na -ede.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịkwalite blọọgụ. Ntọala kachasị ewu ewu bụ Facebook, Twitter, Instagram nyiwe ndị a niile nwere ọtụtụ nde okporo ụzọ.
Nke a bụ akụkụ nke ahịa ị ga -achọ n'ezie. Na mbido mbụ nke blọọgụ gị, ọ na -ewe nnukwu oge ime ka ndị mmadụ mara onye ị bụ na ihe blọọgụ gị gbasara. N'okwu a, ị nwere ike ịga zụrụ onwe gị gwa ndị na -agụ ihe bụ blọọgụ gị? Kedu ụdị ọdịnaya ị na -ede? Facebook, Twitter, Instagram ụbọchị ndị a bụ ụzọ ama ama maka ịme ezigbo ahịa
N'oge mmalite nke njem blog mbụ m, mgbe m dere akụkọ ahụ n'oge ahụ, Ekeere m otu blọgụ m na otu Facebook dị mkpa. Nke a na -enyere m aka ịkwọ okporo ụzọ gaa na webụsaịtị m.
Na mgbakwunye na nke a, na Twitter, ị nwere ike irite uru na hashtags. Na Instagram, ị nwere ike bulite onwe gị aha webụsaịtị webụsaịtị. Mepụta vidiyo dị mkpirikpi maka posts Instagram nke na -amanye ha ma dee ihe na -akpali akpali nke na -akpali ndị mmadụ ịpị aha blọgụ gị na Google iji chọpụta ebe ị nọ wee gosipụta ọchịchọ ịgụ ọdịnaya gị ka ha nwere ike..
Mgbe ọdịnaya ịde blọgụ gị ga -ewu ewu n'etiti ndị na -ege ntị. You have several ways to monetize it. Depending upon the topic, you are writing you have to pick the best way to monetize and earn money through your readers.
Ugbu a, when it comes to monetization of your website. N'eziokwu, monetization relies on the kind of website you are driving. Ọmụmaatụ, if I am writing about beauty creams. In my blog post, n'okwu a, I have the opportunity to recommend some of amazon’s products for the international audience.
When I keep on writing the article, Aga m ekerịta ahụmịhe nke m ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ yana ngwaahịa m na -eji.
Mgbe ejiri ngwaahịa a kpọtụrụ aha zụrụ ya Njikọ njikọ Amazon, nke a ga -enyekwa gị ezigbo ọrụ.
N'akụkụ aka nke ọzọ, mmejuputa mmekorita adịghị mkpa etinyere na isiokwu ọ bụla. N'oge a, ị nweghị ike idobe onwe gị na AdSense naanị. enwere ọtụtụ nyiwe mgbasa ozi mgbasa ozi ama ama dịka mediavine, Ezoic nke na -enyere gị aka ị nweta ego 1000 + dollar naanị na mgbasa ozi.
How To Earn $1000/M With Affiliate Marketing: 6 Nzọụkwụ Dị Mfe
Na mkpokọta, starting a blog these days is really valuable. you can write anything that you are interested in. you don’t have to limit yourself to a particular area. the thing is you share the experience with the audience and in return, you are getting money from it.
Nke gara agaEtu ị ga-esi wuo weebụsaịtị mgbe ịzụrụ ngalaba aha?